Sakafo azo antoka - sakafo mandritra ny herinandro ho an'ny tovovavy iray
Ny fandaharam-potoana ara-tsakafo mahakasika ny fahaverezan'ny herinaratra mandritra ny herinandro dia ahafahan'ny olon-drehetra hankasitraka ny soa rehetra azo iainana. Ny fisafidianana ny sakafo mety ho an'ny sakafo dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny vatanao ihany fa manalavitra ny lanjany .
Ahoana no hanaovana drafitra hahazoana sakafo mahasalama mandritry ny herinandro?
Efa ela ny mpahay siansa no namaritra ny fitsipika fototra izay ahafahan'ny tsirairay maniry ny hihinana sakafo mahasalama.
Ny fototry ny fandaharana mahomby amin'ny herinandro:
Ilaina ny mandà mofomamy, mamy, mifoka, baka, etc. Ny sakafo toy izany dia avo avo amin'ny kalôria, ary tsy misy na inona na inona ny zavatra ilaina ao.
Zava-dehibe ny misotro rano be loatra, satria ilaina ny metabolism. Ny tahan'ny isan'andro dia tokony ho 1 litatra farafahakeliny, ary ny rano dia madio ihany.
Ny fandaharam-potoana ara-tsakafo tokony atao mandritra ny herinandro dia tokony ahitana sakafo dimy. Ny rafitra toy izany dia manampy amin'ny fihazonana metabolismana ary tsy mahatsapa hanoanana.
Ny ampahany dia tsy tokony ho lehibe, mba tsy handrefesana ny gram, dia afaka mifantoka amin'ny palmao, izay napetraka ny ampahany.
Amin'ny sakafo maraina, mila mihinana voankazo (sereal, mofo), izay hanome herinaratra mandritra ny andro iray, ary azonao ampidirina amin'ny proteïn (cheese, cheese cottes). Ny takarivam- pifanarahana dia azo ekena amin'ny hariva, saingy tsy tokony ho betsaka izy ireo, fa ny lanjany dia tokony hifantoka amin'ny legioma sy proteinina (trondro na hena). Ny safidy tonga lafatra amin'ny fisakafoanana dia proteinina natolotry ny fodiana an-tanety, izay azo ampiana, ohatra, amin'ny voankazo.
Raha tokony ho ny sakafo dia tokony ilaina ihany koa izy ireo, hany ka mendrika hialana amin'ny biskits. Eo anelanelan'ny sakafo dia afaka mihinana voankazo tsy voasesika, voanjo, misotro yogourt na dite fotsiny.
Ny zava-dehibe sy ny fomba fikarakarana sy ny fiarovana ny zavatra ilaina, tsy maintsy misafidy ny fofona, ny mofomamy, ny mahandro ary ny mahandro ianao.
Ohatra amin'ny sakafo sakafo mahasalama herinandro iray ho an'ny zazavavy iray:
Ny menaka tena ilaina ho an'ny vatana
Inona no sakafo misy fibre?
Guarana - inona ary izany ary ahoana no atao hoe guarana ho an'ny fahazaran-doza?
Ny tombontsoa avy amin'ny Pumpkin ho an'ny vatana
Seleri - tsara sy ratsy
Ahoana no hanatsarana ny fihinanana?
Aiza no misy ny salmon chinook ary inona no ilaina?
Dill - tombony sy fahasimbana
Miady amin'ny orsa
Mastocytoma amin'ny alika
Irina Sheik nianatra lesona
Fifandirana ao amin'ny fianakaviana
Ahoana no ahitanao ny fifehezana?
Sivana membrane ho an'ny fanadiovana rano
Ankizy 17 hazokely ho an'ny ankizy hatramin'ny 8 martsa
Jeans - Fashion 2016
Efitrano fatorana an-trano miaraka amin'ny varavarankely
Ny mpilalao sarimihetsika Uma Thurman dia niarahaba ny rainy tamin'ny hetsika lehibe iray tamin'ny famoahana sary tao amin'ny tranonkala
Aluminium Heating Batteries
Ilay singer Justin Bieber dia nandao ny tranon'i Selena Gomez ny maraina
Voninkazo ho an'ny fampakaram-bady feuille
Salo ao amin'ny banky - ny fomba mahazatra indrindra